रबि पत्नी निकिता पुगिन बिस्कुटकाे पेटीमा छाडिएकि बच्चीकहाँ? के पाल्न दिन्छिन त?(भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > रबि पत्नी निकिता पुगिन बिस्कुटकाे पेटीमा छाडिएकि बच्चीकहाँ? के पाल्न दिन्छिन त?(भिडियो हेर्नुस)
admin August 1, 2020 August 1, 2020 भिडियो, समाचार	0
सोमबार कपन, आकाशे धाराको चौरमा बिस्कुटको बाकसमा फालिएको अवस्थामा भेटिएकी नानुलाई भेट्न चलचित्र बिकास बोर्डको पुर्व अध्यक्ष, फिल्म निर्मात्री तथा लोकप्रिय सँचारकर्मी रबि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल (लामिछाने) पुग्नु भयो । नानुलाई भेटेर माया र आशिर्वाद दिदै दुध, डायपर लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरु हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
त्यसैबिच नानी रहेको सँस्थाकी अध्यक्ष पुष्पा अधिकारीले नानी अरु कसैलाई एडप्ट गर्न नदिने बताउँदै ाननीलाई आफैले छोरी बनाएर पाल्ने बताईन् । धेरै ठाउँबाट नानीको उज्जवल भविष्यको चिन्ता गर्दै आफुले पाल्छु भनेर फोन कल आएपनि आफु कानुनी रुपमा पनि बाधिएको भन्दै पुष्पाले यस्तो भनिन् ।